SriLankan Airlines dia manohy ny sidina ao Moskoa - sidina Colombo avy amin'ny seranam-piaramanidina Domodedovo
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » SriLankan Airlines dia manohy ny sidina ao Moskoa - sidina Colombo avy amin'ny seranam-piaramanidina Domodedovo
Airlines • Airport • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Rosia • Vaovao Mafana Sri Lanka • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Niara-niasa tamin'ny SriLankan Airlines sy Domodedovo teo aloha ny taona 2011 ka hatramin'ny 2015, mpandeha 115,000 no isan'ireo mpandeha.
SriLankan Airlines dia hanao sidina iray mahazatra isan-kerinandro amin'ny asabotsy.
Ny ora hahatongavana any Domodedovo dia amin'ny 4:30 maraina, ny ora fiaingana - 7:15 hariva
Hitohy manomboka ny 31 Jolay 2021 ny serivisy.
Ny mpitatitra fiaramanidina nasionaly any Sri Lanka, SriLankan Airlines, dia manohy ny sidina avy any Seranam-piaramanidina Moskovo Domodedovo mankany Colombo manomboka ny 31 Jolay 2021. Domodedovo no hany seranam-piaramanidina misy ny Hub Aviation Moscow izay azon'ny mpandeha misidina mivantana mankany amin'ity toerana itodiana ity.
Ny fiaramanidina dia hanao sidina mahazatra isan-kerinandro isaky ny asabotsy. Ny ora hahatongavana any Domodedovo dia amin'ny 4:30 maraina, ny ora fiaingana - 7:15 hariva
“Ity dia rohy mampifandray ny SriLankan Airlines rehefa mifandray amin'ny firenena lehibe indrindra eto an-tany isika izay fantatra ihany koa ho iray amin'ireo tanjona ara-kolontsaina sy manan-tantara lehibe indrindra. Ity hetsika ity dia hanolotra làlana fitsangatsanganana vaovao sy mora hampifandraisana ny Federasiona Rosiana sy ireo firenena manodidina. Miandry fatratra ny fandraisana ireo mpitsidika Rosiana any Sri Lanka sy ireo mpandeha an-tsambo izahay ho any Russia ”, hoy ny filoha tale jeneralin'ny SriLankan Airlines Vipula Gunatilleka.
Niara-niasa tamin'ny taona 2011 ka hatramin'ny 2015 ity mpitatitra fiaramanidina sy Domodedovo ity dia nahatratra 115,000 ny mpandeha.
"Colombo amin'izao fotoana izao dia hita fa toerana tsy manam-paharoa ho an'ny Hub Aviation Moscow", hoy ny talen'ny seranam-piaramanidina Moscow Domodedovo Andrey Pavlov. - Ny fahatongavan'ny SriLankan Airlines eo amin'ny tsena rosiana dia hanokatra fotoana maro amin'ny fampandrosoana ny fizahan-tany ny firenentsika. Azontsika antoka fa ny traikefa nahafinaritra teo amin'ny fiaraha-miasa teo aloha dia ahafahantsika miasa amin'ny ho avy.
SriLankan Airlines no mpitatitra voalohany tany amin'ny faritra Azia atsimo nahazo ny naoty 'Diamond' avy amin'ny Airline Passenger Experience Association (APEX) sy ny SimpliFlying, fenitra voaray ho an'ny fepetra fiarovana fanampiny sy ny fitandremana fidiovana feno narahina hatramin'ny nanombohan'ny areti-mandringana manerantany. SriLankan Airlines dia seranam-piaramanidina manana mari-pankasitrahana manana ny lazany amin'ny maha-mpitarika manerantany amin'ny serivisy, fampiononana, fiarovana, fahamendrehana ary faharetan'ny fotoana.